မိကောငျးဖခငျသားသမီးမို့ ဘယျသူ့နောကျကို မှ ဘယျလောကျရရ မလိုကျခဲ့ဖူးပါရှငျလို့ ပွနျဖွရှေငျးလာတဲ့ ခေးဆကျသှငျ.. – Cele Lover
မိကောငျးဖခငျသားသမီးမို့ ဘယျသူ့နောကျကို မှ ဘယျလောကျရရ မလိုကျခဲ့ဖူးပါရှငျလို့ ပွနျဖွရှေငျးလာတဲ့ ခေးဆကျသှငျ..
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခေးဆကျသှငျကတော့ ပုဒျမ ၅၀၅(က) ထုတျခံထားရတာကွောငျ့ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေပါတယျနျော။ တိမျးရှောငျနရေတဲ့ကွားက သူမနဲ့ပတျသကျတဲ့ မကောငျးသတငျးတှတေောကျလြှောကျပျေါထှကျလာနပေါတယျနျော။ ခေးဆကျသှငျကိုယျတိုငျလညျး ဒီအကွောငျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးပွနျဖွရှေငျးလာခဲ့ပါတယျနျော။
” ခုခြိနျလူတိုငျးရဲ့ စိတျအခွအေနေ အနအေထားကိုသိပမေယျ့ ရှငျးမှရမယျ့ အနအေထားမို့ သတငျးတှဖေုံးခဲ့ရငျကြျောသှားပေးပါရှငျ့(ကွိုတောငျးပနျထားပါရစေ)အနုပညာကိစ်စကလှဲလို့ ဘယျအခကွေးငှနေဲ့ဘယျသူ့နောကျမှ မလိုကျပါဘူးရှငျ
…ချေါလို့ရတယျတှေ ဘယျလောကျပေါကျတယျတှပေါးစပျအရသာခံပွီး ပွောနရေငျ မောပါမယျ…အရငျကလညျးမလိုကျခဲ့ပါဘူးအခုလညျးမလိုကျပါဘူးနောငျလညျးမလိုကျပါဘူး
သှားလရော သူငယျခငျြးတှအေုပျလိုကျကွီးထပျကွပျမခှာပါပါတယျ..ခေးမှာ အသိမိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးလညျး ပေါပါတယျ…ခဈြသူရညျးစား ထားတဲ့အခါလညျး ထားပါတယျ..night outတဲ့ ထှကျလို့ရတဲ့အခြိနျတုနျးကလညျး လူငယျပီပီထှကျခဲ့ပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ပိုကျဆံပေးတိုငျးလိုကျပွီး(နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ)
ဆကျဈ ကိစ်စ လိငျကိစ်စ ကုတငျပျေါက ကိစ်စတှနေဲ့ဖြျောဖွပေေးတဲ့ သူမဟုတျပါဘူး… သစ်စာလညျးဆိုရဲပါတယျခေးမဟုတျတာပွောရငျ သှေးစိမျးရှငျရှငျ အနျပါစေ…မဟုတျပဲနဲ့ ပွောတဲ့သူတှလေညျး ကိုယျပွုသညျ့ကံကိုယျ့ထံပွနျပါစေ….အပွငျပနျးနဲ့ မဆုံးဖွတျပါနဲ့……” လို့ ရေးသားလာပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
မိကောင်းဖခင်သားသမီးမို့ ဘယ်သူ့နောက်ကို မှ ဘယ်လောက်ရရ မလိုက်ခဲ့ဖူးပါရှင်လို့ ပြန်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ခေးဆက်သွင်..
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခေးဆက်သွင်ကတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ထုတ်ခံထားရတာကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်နော်။ တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကြားက သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မကောင်းသတင်းတွေတောက်လျှောက်ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်နော်။ ခေးဆက်သွင်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြန်ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်နော်။
” ခုချိန်လူတိုင်းရဲ့ စိတ်အခြေအနေ အနေအထားကိုသိပေမယ့် ရှင်းမှရမယ့် အနေအထားမို့ သတင်းတွေဖုံးခဲ့ရင်ကျော်သွားပေးပါရှင့်(ကြိုတောင်းပန်ထားပါရစေ)အနုပညာကိစ္စကလွဲလို့ ဘယ်အခကြေးငွေနဲ့ဘယ်သူ့နောက်မှ မလိုက်ပါဘူးရှင်
…ခေါ်လို့ရတယ်တွေ ဘယ်လောက်ပေါက်တယ်တွေပါးစပ်အရသာခံပြီး ပြောနေရင် မောပါမယ်…အရင်ကလည်းမလိုက်ခဲ့ပါဘူးအခုလည်းမလိုက်ပါဘူးနောင်လည်းမလိုက်ပါဘူး
သွားလေရာ သူငယ်ချင်းတွေအုပ်လိုက်ကြီးထပ်ကြပ်မခွာပါပါတယ်..ခေးမှာ အသိမိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းလည်း ပေါပါတယ်…ချစ်သူရည်းစား ထားတဲ့အခါလည်း ထားပါတယ်..night outတဲ့ ထွက်လို့ရတဲ့အချိန်တုန်းကလည်း လူငယ်ပီပီထွက်ခဲ့ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံပေးတိုင်းလိုက်ပြီး(နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ)
ဆက်စ် ကိစ္စ လိင်ကိစ္စ ကုတင်ပေါ်က ကိစ္စတွေနဲ့ဖျော်ဖြေပေးတဲ့ သူမဟုတ်ပါဘူး… သစ္စာလည်းဆိုရဲပါတယ်ခေးမဟုတ်တာပြောရင် သွေးစိမ်းရှင်ရှင် အန်ပါစေ…မဟုတ်ပဲနဲ့ ပြောတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်ပြုသည့်ကံကိုယ့်ထံပြန်ပါစေ….အပြင်ပန်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့……” လို့ ရေးသားလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
Previous Article ဓမ်မဖကျကိုပွောငျးပွီး CDM လုပျခဲ့တဲ့ စဈသားမိနျးမတယောကျရဲ့ ရငျဖှငျ့စာ
Next Article ပွညျသူ့ဝနျထမျးတှေ အခြိနျမွီပညျသူ့ဘကျကရပျ ညျပေးကွဖို့ တောငျးဆို လိုကျတဲ့ မွနှငျးရညျလှငျ……